Ogaden News Agency (ONA) – Itobiy – Haduu Ururkii Itixaad ee sanadaha badan la dagaalamayay Itobiya soo xarooday .. Garab ONLF-ahna aan la heshiinay ..!!
Itobiy – Haduu Ururkii Itixaad ee sanadaha badan la dagaalamayay Itobiya soo xarooday .. Garab ONLF-ahna aan la heshiinay ..!!
Posted by ONA Admin	/ September 22, 2013
Weli waxaa noo socda in aan ifino tiirraka ay dacaayadda (brobagaandada) Itobiya ku dhisan tahay ee lagula taliyay inay aad u buunbuuniso si caalamka looga gado. Waxaan ka soo hadalnay dacaayadda ku dhisan – Ciidankii ONLF waan daciifinay oo hadda dagaal xoogan kama socdo Ogadenya, oo ah dacaayad sidaan soo sheegnay aan haysanin lug uu isku taago, sababtoo ah waxaa ku filan in la yidhaahdo hadday sidaa tahay waa inaad dalka u fasaxdaan saxaafadda caalamka oo si xor ah u dhex maraan. Waxaa kaloo kamid ah talooyinka Itobiya lagula taliyay uguna mudnaa inay wax ka badasho hab dagaalkeeda ku dhisan xoog mutuxan, maadaama aanay guul ku gaadhaynin, sababtoo ah shacabka Somaliyeed ee Ogadenya wuxuu u halgmayaa xoriyadiisa oo ah hadaf qaali ah, sidaa daraadeed waxaa lagula taliyay;
Inay Itobiya caalamka u soo bandhigto inay diyaar u tahay Heshiis iyo Wadahadal inay la gasho ururkii diyaar u ah maadaama .. !!
Si hadafka laga doonayo barnaamijkaa oo marxaladiisa ugu dambeeya uu ahaa in JWXO lagusoo duwo wadada loo astaameeyay, waxay Kubarada kula taliyeen inay aadeegsato istraatiijiyda Dabin Dhigga. Nuxurkiisuna yahay – Ugaadha Waxay Dabinka ugu Dhacdaa Faa’iido Doon -. Macnaha waa in la tusaa ONLF hadday soo xarooto waxa la siinayo, hadii kale laga maarmi doono hadaanay tubta loo jeexay soo marin.
Talaabadii 1aad ee Itobiya lagula taliyay inay ka bilowdo waxay ahayd wadahadalkii la yidhi wuxuu dhex maray iyaga iyo UWSLF oo Bilowgiisii iyo Dhamaadkiisiiba isku maalin la maqlay. Waxaana muujinaya inay sidaa ahayd; Xubno ka mid ah xukuumadii Meles Zanawi ayaa ku argagaxay oo dhan ay u qaadaan garan waayay, waxaadna ka garan kartaa arinta inay sidaa tahay; hadalada ay kala sheegeen madaxdii Itobiya ee laga wareystay iyo hababkii kala duwanaa ee caalamka ay ugu soo gudbiyeen.
Ugu horeyn wareysigii uu siiyay wasiirka arimaha federaalka Dr. Shiferaw oo ah ninka ka shaqaynayay arimahan, kana muuqnayay xafladda saxiixa wuxuu yidhi; Heshiiskan nabadeed ee maanta ay dawladda Itobiya iyo UWSLF saxiixeen, wuxuu sii adkaynayaa qodobadii nabadeed ee shirkii Jabuuti aan ku gaadhnay iyo fadhiyadii ka dambeeyay een qaadanay tan iyo markaan ku dhawaaqnay xabad joojinta 2010. Dr. Shiferow wuxuu ahaa ninka u xilsaaran jilidda riwaayadda.
Hasa ahaatee wasiirkii warfaafinta Berket Simon oo isagana qaabilsanaa inuu saxaafadda caalamka gaadhsiiyo heshiiska ayaa ku adkaysanayay inay kooxdan isa soo dhiibeen. Wuxuu yidhi; Waxay go’aansadeen falaagada (rebels) UWSLF inay isa soo dhiibaan .. Waxaa kaloo ka mid ahaa hadalada uu siiyay saxaafadda; Ma’aha UWSLF urur xoog badan leh siduu ahaan jiray, waxayna ka hawlgali jireen dhanka Somaliya, iyagoo xidhiidh la lahaa Eretreeya .. Waxaan sugaynaa inay noo yimaadaan oon aragno habkay doonayaan inay u shaqeeyaan.
Caalamka markay gaadhsiinaysay waxay u sheegtay Itobiya sidan; (Reuters) Koox falaaga Islaamiyiin ah oo handadaad ku hayay shirkadaha baadhitaanka ka wada gobolka Itobiya ee hodanka ku ah Gaaska iyo Shidaalka ayaa isa soo dhiibay – ADDIS ABABA, April 9 (Reuters) – An Islamist rebel group which had threatened to attack oil and gas firms exploring a potentially mineral-rich region of Ethiopia has surrendered, the government said on Friday. Taasoo macnaheedu yahay inay ka mid ahayd ujeedada heshiiskan in shirkadaha shidaalka lagu khaldo.
Waxaa ku xigay in loo soo dhaadhiciyay Ibraahim dheere iyo intii la socotay Ogadenya iyadoo la faray maamulka Jigjiga inay aad u buun-buuniyaan soo dhaweyntooda iyo ka hadalka heshiiska la yidhi way soo saxiixeen. Waxaa la saaray baabuur dusha ka furan, dadbadan oo caleemo ruxayana waxaa loo safay wadada. Waa qayb taariikhda ka mid noqotay oo lawada ogyahay, sidaa darteed ku soo celcelin kale uma baahna. Hasa ahaatee si loo dhamaystiro riwaayadda, waxaa ku xigtay in la yidhaahdo waxaa laga soo daayay jeel Ogadeen boqolaal maxaabiis ah oo ka xidhnaa UWSLF. Waana la ogaa in dadweynaha la soo daayay ay dhamaantood ahaayeen dad shacab ah oo lagu iloobay Jeelka oo loo haystay waxay taageeraan ONLF.
Sikastaba ha ahaatee waxaan cidna ka qarsoonayn in kharash badan ay Itobiya ku bixisay buun-buuninta waxay ku sheegeen heshiiskan iyo soo xareynta qof kasta oo gadaal ka sheegtay inuu ahaa Itixaadka/UWSLF taasoo uu Ibraahim dheere aad u dhex maray caalamka suu u helo qurba joog badan oo sheegta inay ka tirsanaayeen ururkiisa. Itobiya inkastoo ay ogsoonayd sheegtayna inuusan lahayn Itaaxadka tabar badan, hadana qayb fiican ayay ka qaadatay dacaayadda iyo buunbuuninta, waxayna u balan qaaday qofkasta oo magacaa ku imanaya inay bixiso kharashka socdaalkiisa iyo waliba kuwa magacooda la adeegsanayo ee culumada ah kharashka joogitaanskiisa.
Ujeedadii ay ka lahayd Itobiya maxaa uga hirgalay, muxuuse ku dambeeyay riwaayadii magaceedu ahaa -Walaalaha Itobiya iyo UWSLF-. Arimahaa waxaa hubaal ah in hadda aad looga dharagsanyahay gudaha iyo dibadaba. Itobiya jawaasiis u sheqeeya way ka heshay, hasa ahaatee dabinka ciday la rabtay uguma dhicin.
Su’aasha aan yarehe ifin doono qodobkan inta aanan xidhdin wuxuu noqon doonaa; Goormaa loo baahday Mufsidudiin (Salaaxudiin) iyo garabka ONLF (siday Itobiya u suuq gaysay) ee uu madaxda ka yahay?